07|05|20 – Fotoam-pivavahana iraisam-pirenena [Genève, CH] – i am a malagasy in genève
18 mai 2007 25 octobre 2007
07|05|20 – Fotoam-pivavahana iraisam-pirenena [Genève, CH]
Hisy fotoam-pivavahana izay iarahan’ny Paroisse protestante de la Servette, sy ny Fiangonana protestanta miteny Viet-namiana, sy ny Fiangonana Nizeriana miteny anglisy Tower of Refuge, ary ny Fiangonana iraisam-pinoana Malagasy [Fiangonana Kristiana Malagasy eto Soisa sy ny Manodidina, FKMSM] mikarakara ny Alahady 20 May 2007, amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny fiangonana protestanta Servette, [avenue Wendt 55, Genève]. Arahana fiaraha-misakafo izay misokatra hoan’ny rehetra ary ifampizarana sakafom-pirenena samihafa izany fotoana izany.
– Amin’ny 14:30 tolak’andro dia mifamotoana ao amin’ny « parc des Bastions » eo anoloan’ny « Mur des Réformateurs » miaraka amin’ny firenen-kafa ny Malagasy. Avy eo no hilahatra hitanjozotra hizohy ny « Cathédrale Saint-Pierre » ny mpiangona. Marihina fa avy amin’ny afy efatry ny tanàna dia hisy mpilahatra avokoa.
– Amin’ny 15:30 tolak’andro dia hofaranana amin’ny fotoam-pivavahana iraisam-pirenena iombonan’ireo fiangonana Kristiana rehetra nandray anjara tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Reformasiona eto Genève, ao amin’ny « Cathédrale Saint-Pierre ».
Posté dans fivavahanaTagué fête de la réforme, fiangonana, fivavahana, FKMSM, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, reformasiona, vavakapar tomavanaLaisser un commentaire
← 07|05|19 – Antsam-panahy iraisam-pirenena [Genève, CH]
Fetin’ny Reformasiona [Genève, CH] →